बुनाइ, यस प्रकारको बुनाई, त्यहाँ धेरै लामो समय भएको थियो। पहिलो बुना आइटम फिर्ता ई.पू., पेरु मा पत्ता थिए तेस्रो शताब्दीमा गर्न मिति। तर केही अनुसन्धानकर्ताहरूले पुरातन युनानी लागि चिनिन्थे तर्क यस प्रकार बुनाइ। यसलाई निट थकित र स्कैंडिनेवियाई वाइकिंग कि फेला परेन। शताब्दीयौंदेखि त्यहाँ उहाँको लागि बुनाई को नयाँ प्रविधी, सुधारिएको सामाग्री थिए, तर पनि दस वर्ष पहिले, यो तपाईं प्लास्टिक बैग देखि बुनना गर्न सक्ने कल्पना गर्न असम्भव थियो।
प्याकेज देखि बुनाई मालिकको बिक्री को लागि आइटम प्रदर्शनी, र दर्शक को ठूलो भीडलाई आकर्षित कि आफ्नै प्रदर्शनियों व्यवस्था भनेर लोकप्रिय बन्नेछ। तौलिया, खिलौने, बैग, टोपी, जुत्ता र लुगा: प्याकेजहरू को मोडेल को एक किसिम बुनना। निस्सन्देह, यस्तो वस्त्र प्लास्टिक धेरै केही मानिसहरू चाहनुहुन्छ किनभने व्यावहारिक र सहज कुरा भन्दा बढी प्रदर्शन लगाउन हुनेछ। तर प्लास्टिक बैग देखि अन्य लेख एक, रोचक असामान्य र विशेष उपहार हुन सक्छ।
प्याकेज देखि बुनाई र तपाईं जस्तै किनमेल वा समुद्र तट झोला रूपमा धेरै व्यावहारिक कुराहरू, गर्न अनुमति दिन्छ। ठीक बालुवा वा crumbs खुलेर तिनीहरूलाई बाहिर पतन हुनेछ, आफै उत्पादन सुरक्षित एक वाशिंग मिसिन मा धोए गर्न सकिन्छ, यो यसको आकार र रूप राख्ने हुनेछ।
रोजगार कठिन - तपाईं प्याकेजहरू को कि बुनाई लाग्छ? क्रमबद्ध को केही! तपाईं कसरी बुनना वा crochet गर्न थाहा छ भने, तपाईं सुरक्षित तरिकाले यो पाठ प्रक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ। तर पहिलो तपाईं एक बनाउन आवश्यक "यार्न।" यसो गर्न, तपाईं प्लास्टिक बैग मा शेयर र "सूत्रहरू" तयार मुक्त रात को एक जोडी भुक्तानी गर्न आवश्यक छ।
प्याकेजहरूमा कहाँ लिने? यो घर मा पहिले नै भन्ने व्यक्तिहरूलाई शिल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ, र तपाईं दोकान मा तिनीहरूलाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अलग रंग मा फोहोर बैग उत्पादन थाले, त्यसैले तिनीहरू हामीलाई अनुरूप हुनेछ। यस्तो देखि एक सामाग्री एकदम रंगीन हस्तशिल्प हुनेछ। उत्पादन दिन लायक थियो भन्ने सुनिश्चित गर्न, तपाईं पारदर्शी र अपारदर्शी प्याकेजहरू चयन गर्न आवश्यक छ। तपाईं प्याकेजहरू फैलिनु र ह्यान्डलहरू र तल सिउनी कटौती गर्न आवश्यक सुरु गर्न। त्यसपछि workpiece जो, बन्न छल्ले unfolding गर्दा स्ट्रिप्स मा धेरै पटक आधा ठाडो र तेर्सो कट मोड।
यो स्ट्रिप्स मा केहि शब्द भन्न आवश्यक छ। को प्लास्टिक झोला denser, को पतली बैंड हुनुपर्दछ, र विपरित। तपाईं फोहोर बैग को बुनाई प्रदर्शन गर्नेछन् भने सेन्टिमिटर लगभग दुई बाक्लो र सुपरमार्केट देखि पैक सेन्टिमिटरले स्ट्रिप्स मा कटौती गर्न सकिन्छ को स्ट्रिप्स चौडाई कटौती। खैर, एक घनत्व प्राप्त गर्न "मुद्दा" गर्न, तपाईं बराबर चौडाइ एक उत्पादन स्ट्रिप्स बनाउन, तपाईं शासक र पेन्सिल तिनीहरूलाई चिनो लगाउन सक्नुहुन्छ प्रयास गर्नुपर्छ। तपाईं सँगै केही प्याकेजहरू राख्न भने यो छिटो जानुहोस् हुनेछ। तर तपाईं आफ्नो नम्बर, वा कैंची संग ज्यादा छैन ताकि पहिलो हात प्राप्त गर्न, आवश्यक सम्हाल्न सक्दैन। अब समाप्त प्लास्टिक घन्टी प्रत्येक अन्य जडान र एक बल मा रोल अप गर्नुपर्छ।
प्याकेज देखि बुनाई अनावश्यक साधारण बुनाई यार्न फरक कुनै छ। यो मोडेल निर्धारण बुनना हुक को मोटाइ र आकार चयन गर्न प्लास्टिक "यार्न" मा निर्भर गर्दछ, योजना फेला पार्न आवश्यक छ।
पास्ता बनेको लेख - आफ्नो हातमा भव्यता र कोमल बनाउन!
कसरी आफ्नो हात संग सोफा मा कवर सी गर्न
एक वर्ष spokes बच्चाहरु लागि बुनाई: सामान योजना
Cardigan बुनना वा तयार बनाएको किन्न?
साटन रिबन - आफ्नै हातले फूल के!
Reticulum। मानव Tissues प्रकार
आफैलाई लागि वा मानिसलाई एक उपहार रूपमा - sock बुनाई सुई बुनना
प्राचीन Resort2*, गोवा, भारत: होटल विवरण, समीक्षा
बन्दागोभी को प्रकार
लिप पेन्सिल: कसरी राम्ररी प्रयोग गर्ने?
'ओमेगा ठोस' मा मास्को मा ठोस प्लान्ट